Maalinta: Meey 10, 2017
New Horizons ee Dalxiiska Erciyes
Horizons cusub oo loogu talagalay Dalxiiska Erciyes: Maalgashiga maalgashiga degmooyinka Kayseri Metropolitan, Erciyes wuxuu noqday mid ka mid ah xarumaha dalxiiska adduunka oo dhan wuxuuna qabanayaa shaqooyin muhiim ah oo loogu talagalay horumarinta dalxiiska jiilaalka ee Kayseri. Kayseri Weyn [More ...]
Gaadiidka dhismaha ee dhismaha wuxuu ku dhamaanayaa Kocaeli
Ku Dhamaaday Dhismaha Aqoon-isweydaarsiga Tram ee Kocaeli: Marka la eego mashruuca taraamka ee ay dhistay Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, dayactirka iyo hagaajinta baabuurta taraamka waxaa la samayn doonaa haddii ay dhacdo cilad iyo dayactir aqoon isweydaarsiga iyo dhismaha maamulka. [More ...]
Xereen ka Digniinta Tareenka ee: Gobolka Turkey Tareennada (TCDD) 7. Agaasinka Gobolka, haramaha si loola dagaallamo haramaha ee khadadka cayiman ayaa lagu shaacin doonaa digniinta muwaadiniinta. Qoraal ahaan, 16 May 2017 on Eskisehir - [More ...]
Agaasimaha Guud ee TCDD Apaydin: Maqnaanshaha jidadka
10-16 waxaa loo dabaaldegay sidii May Naafada Todobaadka si loo wadaago loona xalliyo dhibaatooyinka haysta muwaadiniinta naafada ah laga soo bilaabo dhalashada illaa dhammaadka nolosha ee bulshada. Waxaan adeegyo u fidinaa muwaadiniintayada naafada ah ee qiimeeya bini'aadamka hay'addeenna. [More ...]
Mas'uuliyiinta MNNIM oo baadhitaan ku sameeyay TÜDEMSAŞ
Wasaaradda Tacliinta Qaranka AuthoSGB Mas'uuliyiinta Waxaa laga helay Baaritaannada TÜDEMSAŞ: İSGB (Qeybta Caafimaadka iyo Amniga) saraakiisha iyo isuduwayaasha gobollada ee ka shaqeeya Wasaaradda Waxbarashada Qaranka iyo Agaasimeyaasha Waxbarashada Qaranka ee Gobollada ayaa booqday TÜDEMSAŞ. qaran [More ...]
Burula published, Bursa Yunuseli Cashuur bixiyaha ayaa la daabacay: Dakhliga rasmiga ah ee Madaarka Yunuseli, oo ay maamusho Burulaş, oo ka mid ah shirkadaha Magaalada Bursa Metropolitan District, ayaa la daabacay. qabyada ah ee hordhaca ah ee dhibaatada canshuur ah ay sabab u tahay heerka jawaab sare, hakaga dalka Turkiga [More ...]
Madaxweynaha Bıçakçıogga wuxuu helaa Kabaha Warshadaha ee Lyon
Duqa magaalada Bıçakçıoğlu wuxuu qaabilayaa xadhkaha xargaha ee Ropeway ee Lyon: Mashruuca xarig-jarka masaafada ugu dheer ee Badda Madow waxaa la adeegsan doonaa degmada Beşikdüzü ee Trabzon bisha Oktoobar ee sannadkan. Waxay ka dheeraan doontaa mashruucyada xarig-jarka ee Ordu iyo Samsun [More ...]
Wadahadal wadiiqada Trabzon ah: 'Siyaasiyadu maahan shaqada'
Guddoomiyaha Golaha Golaha Bulshada ee degmada 'Ortahisar CHP Group' Gudoomiyaha Degmada Degmada Turgay Sahin Hakan Terzioglu oo ka tirsan xisbiga AK Party ayaa dhaleeceyn adag kala kulmay mashruuca tareenka. Isagoo ka jawaabaya hadalada Terzioğlu'nun Sahin Sahin, '' Railway Of-Caykara'dan [More ...]
Ma kharashka taraamka dheeraad ah in Samsun waxa uu ku yaalaa ee Turkey iyo saxaafada qaranka oo ka mid ah adeegyada ugu gaadiidka taraamka qaalisan ee gobolka Samsun leh $ 4 maxaa yeelay, dhaqdhaqaaqa, tram oo laga qaado muwaadiniinta qaar [More ...]
RayHaber 10.05.2017 Warbixinta Shirka
Dhamaystirka Heerka Hagaajinta iyo Dhammaystirida Qoraalku waa Lagu Qabanayaa Qaybta Kontoroolka Gaadiidka waxaa la gadan doonaa Dhisidda Nidaamka Biyaha Laga Baahan Yahay Dib-u-kobcinta iyo Dhismaha Qalabka
Dariiqooyinka Xalka ee UTİKAD-Turkish Cargo Workshop waxay ku jireen Agenda: Aqoon isweydaarsi wada jir ah ayaa loo soo agaasimay May 4 oo ay soo qabanqaabiyeen Shirkadda Cargo ee Turkiga iyo Ururka Xamuulka Caalamiga ah. Khibradaha wakaalada xamuulka hawada xubnaha ka ah UTİKAD [More ...]
Awood ma leh in la isku daro tareenka Trabzon
Lama awoodo in la mideeyo xitaa wadada tareenka ee Trabzon: Ka dib markii injiilka Trabzon la siiyay, degmadu waxay bilaabeen inay soo baxaan… Xaalad xiisa badan ayaa bilaabatay ka dib markii Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan uu siiyay injiilka tareenka ee Trabzon. hadda [More ...]
New York waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan Mareykanka iyo adduunka. Wadada tareenka ee New York ayaa si weyn u fududeysa gaadiid dalxiisayaasha iyo sidoo kale New York. Hagaag, marinka dhulka hoostiisa ee New York [More ...]
Rukumo Burburin Lahaanshaha Buuxinta Qadka Tareenka ee Beyoge Nostalgic
Dhismaha Waddada Istiklal Street iyo Dhismaha Waddada Istiklal iyo Dhul-daaqsimeedka iyo Dhismaha Waddada Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul [More ...]